Duurjoogta duurjoogta ee Odisha | Raadi Flora iyo Fauna - 993.702.7574
Duurjoogta duurjoogta Odisha
Dabbaasha duurjoogta ee Odisha leh Sandpebbles - Khibrad muuqaal leh dabeecadda, Flaura iyo Fauna Odisha.
Raadinta dareen duur-joog ah oo dhab ah? Turki duurjoogta ah Odisha waa meesha ugu dambeysa ee aad ku tagto!
In kastoo xeebaha iyo macbudyada ay gurigooda ku qaataan caansaankooda, Daawashada Duurjoogta Cimilada Odisha waa wax cajiib ah oo la kulma. Iyada oo farabadan oo ah beeraha qaranka, kaydka tigidhada, iyo duurjoogta duurjoogta, gobolku wuxuu leeyahay noocyada soo jiidashada fauna iyo dhirta oo aanad meel kale ka helin adduunka. Noqo Beeraha Mangrove iyo Wetland of Bhitarkanika ama kaymaha Chandaka, ninkeeda iyo lakulanka dawlad-goboleedka bariga Hindiya wuxuu hayaa duur-joogta hodanka ah.
Dammaanadda Duurjoogtaada ee Odisha , waxaad fursad u heleysaa inaad aragto xayawaanka ku nool agagaarkooda aan la taaban Karin, dhegeystaan ​​codkooda iyo dareemaan garaaca wadnahaagu inuu kordho farxad. Halkan, waxaad ka arki kartaa boqollaal jilicsan oo kala duwan oo ah xayawaanka ku jira maskaxda, maroodiga, yaxaasyada, geedka, jajab, iyo waxyaabo kale oo badan oo ku nool deegaankooda dabiiciga ah.
Xayawaankeena Duurjoogta ah ee Odisha ayaa loo qoondeeyey danahaaga waxaadna siinaysaa fursad aad ku aragto ugu wanaagsan ee duur joogta ah ee ay tahay in gobolka uu bixiyo.
DAY 01: Booqashada Bhubaneswar
Imaanshada garoonka diyaaradaha ee Bhubaneswar / Saldhiga Tareenka iyo u wareejinta hoteelka. Gelinka dambe ee booqashada macbadka Lingaraj, Khandagiri Udayagiri Jain Maves. Xilliga habeenkii ah ee Ekamra Haat Casho iyo Habeenkii oo ku yaala Bhubaneswar.
DAY 02: Bububaneswar - Satkosia
Ka dib quraacda booqo Satkosia via Angul. Qaado markabka doonyaha ee Satkosia Gorge halkaas oo aad ka heli karto Mugger iyo Ghariyaal badan oo ku yaalla bangiyada qulqulka. Dabeecad wax ku ool ah oo dabagal ku socota dabeecadda dabiiciga ah. Casho iyo Habeenkii Satkosia.
Ka dib quraacda booqo Bhitarkanika. Kusoo dhawow Ciyimkayaga .Qorshaha dabiiciga ah ee guriga lagu tago ee Kalibhanja Diha Island oo ku yaala doonnida xeebta ee ay ansixisay Waaxda Duurjoogta, si ay ugu raaxaystaan ​​aragtida cabsida Ramsar. Habeenkii booqo jagada Jagannath si ay uga qayb qaataan Live Aalati Darshan. Fiidnimadu waxay ku raaxeeyaa xerada qamriga iyo Cunnada. Habeenkii oo ku yaal Sandbirdhiga Sandbashyada Jungle Resorts.
Ka dib quraac quruxsan oo qurux badan, booqo Bird sanctuary, oo u socdaalaya munaarada miyiga ee Boqorada Hore, u socodka maraakiibta kala duwan ee ku yaalla doonyaha dabiiciga ah ee ay ansixisay Waaxda Duurjoogta, oo lagu magacaabo Yaxaaska. Qadada ka dib booqo madxafka iyo mashruuca. Habeenkii ayaa ku raaxaysta dabka kaamka Cuntooyinka iyo Cunnada. Habeenka oo dhan Sanduuqa Qumaanka ee Sanduuqa Jungle.
Ka dib markii quraac qurux badan oo qurux badan ay booqanayaan Similipal Tiger Reserve. Soo gal-galka hudheelka. Ka dib qado dabeecadda dabeecadda iyo dabeecadda dabiiciga ah ee xannaanada beeraha, booqo Beerista taranka. Casho iyo habeenkii habeenkii Similipal.
DAY 06: Khamiis
Ka dib markaad quraacdo booqo Barehipani iyo Joranda Waterfalls iyo Jungle Safari. Kadib booqo Chahala Zone. Casho iyo habeenkii habeenkii Similipal.
DAY 07: Khamiis - Ka bax
Ka dib marka quraacdu baxdo safarka dambe